June 2022 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Waa habeennimo Talaado ah Taariiiikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 29-11-1443…
Isbitalkan ayaa bixin doona adeegyo caafimaad oo muhiim ah, wuxuuna dabooli doonaa baahida bulshada, waa Isbital hab casri ah loo dhisay oo ay ka hawlgayaan dhaqaatiir takhasisi ah.
Dhageyso: Maxkamadda Sare Ee Mareykanka Oo Laashay Qaanuunkii Dumarka U Ogolaanayay Inay Ilmaha…
"America ayaa dib ulaabatay" waxaa sidaas lagusoo qoray ciwaannada wargeysyada ugu caansan dalka Mareykanka saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee wadankaas ay mamnuucday in dumarku ilmaha iskasoo ridi karaan. Go'aan rasmi ah oo…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa isniin taariiiikhda hijriguna waxay ku…
Axmad	 Jun 26, 2022 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Waa habeennimo Axad ah Taariiiikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 28-11-1443 oo…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad taariiiikhda hijriguna waxay ku…